Rujeko bar owner in cheating storm with a 17 yr girl » Masvingo Mirror
September 12, 2021 September 11, 2021 RASHID SAIDI 0 Comments
Abhero, iwe Abhero, zvino unondihwa here, Abhero, iweee Abhero…..mongo pedzisawo.
Makadiiko paVID apo, ndati murisei genga repazvitambi zvekuchairisa ngoro dzemoto.
I plead with you gentle followers of this your most popular column south of the Sahara to properly wear your nice masks, sanitise and maintain social distance even from your loved ones so that you may continue to love them and so on and so on.
Did you know that HOTH started in Jack City, I mean Rujeko, kwadzinochekwa baba, yes the first instalment came from there and the rest is history.
Vuya uhwe kumaGumtree konaka hama dzangu, bata panonaka, parisei paTsungai market apoo, I mean icho chitsvuku icho chidoko. Imheremhere.
The incident happened last week as the girlfriend visited his man, muface wake, pazhanga pake achida kumbomuona sezvo anga ava nemazuva. Anga omushuva, chishuvo.
The man is a businessman, muzvinachitoro medu muJack City A, yes Mwari akamuitira nyasha, he owns a bar and a grocery shop and drives a car Nissan car, kachipick up kewhite so. He stays in Eastvale with his three children, yes mukadzi akaenda akati handingagariri mashura akadero, he can’t keep his zip shut, shut mouth, open zip, baba vanorura ivavo. Apa vanoda zvidoko, anonyaradza wezvidoko apa akaitigwa nyasha newedenga.
On this day the girl anonzi Sharani Goonah, chakabatana, arrived at the house, kuEastvale and found our man, iye wokuitigwa nyasha nemunyaradzi, busy with a 17 year old girl in bad stark naked, varimusvo, ziya richichururuka, since this is a family newspaper HOTH will spare you the details.
Sharani wakavavazveiwe unongohwa iwe. She went beserk, kuita senyathi yarumwa nemago, magomombe aya mahombe hombe.
Akatanga kupwanya zvinhu from the kitchen kusvika kubhedhuru kwavanga vakavata nekamwana ikako.
She destroyed property in the presence of the three innocent children, musikana akagwadziwa iyeye, kupaza zvinhu kunge munhu ane gona muchiuno.
Asi Sharani anenge anegona because aahayaa muface arikuti iye woga ndiye munyaradzi wake.
← Craft Properties Ceo Taruberekera Awarded Oxford Professorship
Woman killed after collecting money from Mukuru →
Catholic Daily Liturgical Guide 19.07.2021 Masvingo Mirror
Privileges of joining registered trade unions and employer organization